hazavana madio Factory | Mpanamboatra hazavana madio any Sina
Jiro alim-bovoka alimo alimo ho an'ny fitsaboana, sakafo, fahadiovana, herinaratra, efitrano madio
Ny alokaloka maivana dia namboarina tamin'ny karazana ranomaso. Ny jiro dia mifamatotra amin'ny làlambe na napetraka misaraka, miaraka amina tsipika fifandraisana haingana ao anatiny. Ny vatan'ny jiro sy ny làlan-jotra dia vita amin'ny faritra vy ary mihidy miaraka amin'ny visy vy tsy misy fangarony mba hiantohana fa tsy hianjera ny vatan'ny jiro sy ny lalan-kely. Azo ampiharina amin'ny fanafody, fahasalamana, sakafo, elektronika ary fenitra avo lenta amin'ny jiro fanadiovana.
kilasy 1 any ambony na fahazavana misokatra ambany misokatra
Mifanaraka tanteraka amin'ny keel ny hazavana, ary mora ny mametraka azy. Ny vatan-jiro sy ny fonony aoriana dia feno tombo-kase avo lenta. Tsy misy vovoka, mora diovina, tsy misy masirasira, fonosana miverina mandray karazana varavarana misokatra, raikitra miaraka amina fehikibo avo lenta, mora vohaina sy akaiky, mora tazomina, lesoka habe amin'ny ankapobeny dia latsaky ny +/- 1mm, mifanaraka amin'ny JS141 ny fisaka.
Ny vatana maivana dia natao tamin'ny sisiny beveled ho an'ny fanadiovana mora sy ny fisehoana tsotra. Izy io dia miaraka amin'ny taratra fitaratra. Ny alokaloka maivana dia mifandray amin'ny vatana maivana miaraka amina fitsangatsanganana avo lenta. Mety amin'ny jiro amin'ny atrik'asa elektronika, atrikasa fivarotam-panafody ary atrikasa madio madio ambony.
hazavana madio madio karazana kilasy 1
jiro madio madio ho an'ny efitrano fandidiana mpitsabo ICU
Karatra famolavolana vatana mavo mavo, fisehoana malala-tanana, taratra fitaratra namboarina, volavolan-drafitra luminaire endrika 45 degre, tsara, mora diovina; Ny fifandraisana misy eo amin'ny aloky ny jiro sy ny vatan'ny jiro dia manana kofehy famehezana avo lenta; Ny haben'ny jiro dia azo amboarina. Jiro madio raikitra, mety amin'ny efitrano fandidiana, paroasy ICU, sns.
vy mangatsiaka mangatsiaka nanakodia tontonana kilasy 1 jiro madio
ny hazavan'ny mikraoba dia tsy mila ovaina ho hazavana hita maso, ny halavan'ny 253.7 nm dia mety hisy vokany tsara amin'ny famafana, satria ny sela misy tsiranoka mitroka hazavana dia misy fitsipika, ao amin'ny taratra ultraviolet 250-270 nm no tena mandray betsaka indrindra, variana ny taratra ultraviolet raha ny tena izy amin'ny fitaovan'ny sela na ADN, miteraka angovo fotôlôjika mitambatra atolotry ny mpivady ifotony ADN, mahatonga ny mutation genetika, mahatonga ny bakteria maty eo no ho eo na tsy afaka miteraka, hahatratra ny tanjon'ny sterilization.